Iyi purogiramu yepabonde yakave yakanyorwa kuitira zviri nani kushandira avo vane hanya nemashoko avo 'Mashoko Evo Anozivikanwa' (PII) ari kushandiswa paIndaneti. PII, sezvinotsanangurwa mumutemo weUnited States uye wekuchengeteka kwemashoko, iyo ruzivo runogona kushandiswa pachayo kana nedzimwe ruzivo kuziva, kubata, kana kuwana munhu mumwe chete, kana kuziva munhu ari mumamiriro ezvinhu. Ndapota verenga sangano redu rega rega kuti tinyatsonzwisisa kuti tinounganidza sei, kushandisa, kuchengetedza kana kutonga zvimwe Zvido zvako Zvingazivikanwa maererano newebsite yedu.
Ndeupi ruzivo rwomunhu wega rwandinounganidza kubva kuvanhu vanoshanyira blog yedu, webhusaiti kana purogiramu?
Kana ukaronga kana kunyoresa panzvimbo yedu yepaiti, kana zvakakodzera, unogona kubvunzwa kuti uise zita rako, kero ye email, nhamba yekutumira, nhamba yefoni kana zvimwe zvimwe zvingakubatsira iwe nezvakaitika.
Tinounganidza ruzivo kubva kwauri apo iwe unorayira kana kupinda zvinyorwa panzvimbo yedu.
Isu tinogona kushandisa ruzivo rwedu rwatinotora kubva kwauri apo iwe unyoresa, kutenga, kunyorera tsamba redu, kupindura kuongororo kana kubudiswa kwekutengeserana, kufambisa webhusaiti, kana kushandisa zvimwe zviitiko zvepaiti nenzira dzinotevera:
• Kukurumidza kuronga kutengesa kwako.
Hatishandisi kudzvinyirira kutengesa uye / kana kutengesa kumazinga ePI.
Isu tinotora ruzivo rwekadhi rechikwereti, asi hauna kuziva purogiramu inoenderana neCPI inodiwa zvino.
Tinoshandisa nguva dzose Malware Scanning.
Mashoko ako ega ega anowanikwa kumashure ekuchengetedzwa uye anongopindira nehuwandu hwevanhu vane kodzero dzekuwana dzakakwana dzemitemo yakadaro, uye vanofanirwa kuchengetedza ruzivo rwekuvanzika. Mukuwedzera, zvose zvakaoma / chikwereti ruzivo rwaunopa iwe runyoreka neCrypted Socket Layer (SSL) teknolojia.
Isu tinoshandisa nzira dzakasiyana-siyana dzekuchengetedza kana munhu anoshandisa nzira yekuchengetedza kuchengetedzwa kwemashoko ako ega.
Nokuda kwekuita kwako tinogona kuchengetedza ruzivo rwekadhi rako rechikwereti rakachengeterwa kwemazuva anopfuura 60 kuitira kuti tidzidzise mirairo yeramangwana, uye kugadzirisa nzira yekubhadhara.
Tinoshandisa 'cookies' here?
Ehe. Makiki mapepa maduku akaita sendi kana mupiriri webhutori achiendesa mudhavhidha yekombiyuta yako kuburikidza neWeb browser yako (kana iwe uchibvumira) izvo zvinoita kuti hurongwa hwewebsite kana kuti hupi hupi huve hunoziva musikana wako uye huye uye uyeuke mamwe mashoko. Somuenzaniso, tinoshandisa makiki kuti tibatsire kuyeuka nekugadzira zvinhu zviri mumotokari yako yekutenga. Iyo inoshandiswawo kutibatsira kuti tinzwisise zvaunofarira zvichibva pane zvawakaita kana zvezvino zvekuita kwebasa, izvo zvinoita kuti tikwanise kukupa iwe huri nani huripo. Isu tinoshandisa makiki kutibatsira kuti tive nehurukuro yehuwandu hwemasayiti yepaiti uye nzvimbo yekubatana kuitira kuti tikwanise kupa zviitiko zvema site uye zviri nani mune ramangwana.
Tinoshandisa makiki ku:
• Batsira kuyeuka nekugadzira zvinhu zviri mumotokari yekutengesa.
• Kunzwisisa uye kuchengetedza zvido zvevashandi zvekushanyirwa mune ramangwana.
• Chengetedza nhamba yemashambadziro.
• Anounganidza aggregate data pamusoro pepaiti yepaiti uye nzvimbo yekubatana kuitira kuti vape zviitiko zviri nani zvemasayithi nezvishandiso munguva yemberi. Isu tinogona kushandisawo mazano evanhu vatatu vanovimbika avo vanocherechedza ruzivo urwu kwatiri.
Iwe unogona kusarudza kuva nekombiyuta yako inokunyevera nguva imwechete kana cookie iri kutumirwa, kana iwe unogona kusarudza kubvisa ma cookies ose. Iwe unoita izvi kuburikidza nekushandura kwako. Sezvo mushanduri akasiyana zvakasiyana, tarisa paMubatsiro Wemubatsiri wako kuti udzidze nzira yakarurama yekuchinja makiki ako.
Kana iwe ukavhara maokie, mamwe maitiro achadziviswa. Icho hachizokanganisa ruzivo rwemushandisi inoita kuti nzvimbo yako yehutachiona ibudirire uye irege kushanda zvakanaka.
Zvisinei, iwe uchiri kukwanisa kuisa mirairo.
Isu hatitengesi, kutengesa, kana kutumira kune dzimwe nyika mapepa ako Mashoko Akasvikanwa Pamwe kunze kwekunge tipei vashandisi nekufanoziva. Izvi hazvirevi webhusaiti yekubatana nevamwe uye mamwe mapato anotibatsira mukushanda webhusaiti yedu, kuita bhizinesi redu, kana kushandira vashandi vedu, chero bedzi mapato aya anobvumirana kuchengetedza iyi ruzivo rwakavanzika. Tinogonawo kusunungura ruzivo kana kusunungurwa kwakakodzera kuti titeerere mutemo, shingairira mazano edu epaiti, kana kudzivirira kodzero dzedu kana dzevamwe, pfuma kana kuchengeteka.
Zvisinei, ruzivo rusingazivikanwi rwekushanyirwa kwevatorwa rungapiwa kune mamwe mapato ekutengeserana, kushambadzira, kana zvimwe zvinoshandiswa.
Dzimwe nguva, pamusana pekuziva kwedu, tinogona kusanganisira kana kupa zvikwereti zvechitatu kana zvemasangano pane webhusaiti yedu. Aya mapato echitatu ane mazano akazvimirira uye akazvimirira. Saka isu hatina mhaka kana mutoro wezvakanyorwa uye mabasa ezvibvumirano izvi. Kunyange zvakadaro, tinotsvaka kuchengetedza kutendeseka kwenzvimbo yedu uye kugamuchira chero upi nehupi pamusoro pemasayiti.
Zvido zvekutsvaga zveGoogle zvinogona kupfupiswa neGoogle Advertising Advertising. Dzinoshandiswa panzvimbo yekupa maitiro akanaka kune vashandisi. https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en
Tinoshandisa Google AdSense Advertising pane webhusaiti yedu.
Google, sevatengesi vechitatu, inoshandisa makiki kuitira kushambadzira panzvimbo yedu. Kushandiswa kweGoogle yeDART cookie kunoita kuti itange kushambadzira kune vashandisi vedu kuburikidza nekushanyira kwatakaita panzvimbo yedu uye dzimwe nzvimbo paInternet. Vashandi vanogona kusarudza kushandisa DOC cookie nokushanyira mutemo weGoogle Ad uye Content Network.
• Kudzokorora neGoogle AdSense
• Google Display Network Kugadzirisa Kuzivisa
• Kuwanda kwevanhu uye Kufarira Kuzivisa
Isu, pamwe chete nevatengesi vechitatu vatatu seGoogle vanoshandisa yekutanga cookies (zvakadai seGoogle Analytics cookies) uye cheki-party cookie (yakadai seCockClick cookie) kana vamwe vatori vese vekare pamwe chete kuunganidza data maererano nekubatana kwevashandi ne zvido zvekutsvaga uye mamwe mabasa echibasa sezvavanosangana newebsite yedu.
Vashandi vanogona kugadzirisa zvido zvekuti Google inokuzivisa sei uchishandisa peji yeGoogle Ad Settings. Zvimwe, unogona kusarudza nekushanyira Network Advertising Initiative Opt Out peji kana kushandisa Google Analytics Opt Out Browser kuwedzera.
COPPA (Vana Online Privacy Protection Act)
Kana zvasvika pakutsvaga kwemashoko ega ega kubva kuvana vari pasi pezera remakore e13, Vana veInternet Privacy Protection Act (COPPA) vanoisa vabereki kutonga. The Federal Trade Commission, United States 'inodzivirira vatengi, inotsigira COPPA Rule, iyo inotsanangura zvinoshandiswa nevashandi vepawebsite nemasaiti epakombiyuta kuti vadzivirire kuchengetedza kwevana nekuchengeteka paIndaneti.
Hatitengesi zvakananga kune vana vari pasi pezera remakore e13.
MUTA WEMUMWE WOKUTANGA
I-CAN-SPAM Mutemo mutemo unoisa mitemo ye email yebhizimisi, inogadza zvido zvemashoko ekutengeserana, inopa vanogamuchira kodzero yekuti emaimeri amire kubva kutumirwa kwavari, uye anotsanangura chirango chakaoma chekuputsa.
Tinounganidza email yako kero kuitira kuti:
• Kutumira mashoko, kupindura mibvunzo, uye / kana zvimwe zvikumbiro kana mibvunzo
• Kutonga mirairo uye kutumira mashoko nekuvandudzwa maererano nemirairo.
• Kutumira iwe humwe huwandu hwemashoko ane chokuita neyakagadzirwa uye / kana basa
• Misika kune tsamba yedu yekunyora kana kuti kuramba tichiendesa ma email kune vatengi vedu mushure mokunge mutengesi wekutanga watoitika.
Kuti tive maererano neCANSPAM, tinobvumirana kune zvinotevera:
• Usashandisi zvinyengeri kana kuti zvisiri izvo zvidzidzo kana kuti maizai e-mail.
• Tsvaga mharidzo sechishambadziro mune imwe nzira yakakodzera.
• Kukudza kusarudza / kusazvinyora zvinokumbira nokukurumidza.
• Rega vashandisi kuti vasazvinyora nekushandisa chibvumirano pasi pee-mail imwe neimwe.
Kana pane imwe nguva iwe ungada kuzvidzivirira kubva kune mayemeri emajeri, unogona kutumira email kwatiri
• Tevera mirayiridzo iri pasi pemhesi imwe neimwe.
uye tichakurumidza kukubvisa kubva ALL correspondence.
Kana pane mimwe mibvunzo ine chokuita nemutemo wepabonde, unogona kutitumira isu uchishandisa mashoko ari pasi apa.
Yakagadziriswa Pakupedzisira kwe2017-01-18